Dunida Maarso ee Nabadgalyada iyo Dhibaatooyinka - Dunida Maarso
2-dii MARAYKARKA CARUURTA ayaa la soo gabagabeeyey
Heshiiska mamnuuca hubka nukliyeerka ayaa durba dhaqan galay +info
MARSHADII 1AAD EE LOOQAATAY MAREYKANKA MULTI-QARANKA IYO MACLUUMAADKA NOLOSHA AYAA LAGU SHAQAY +info
2 World Maarso Nabadda iyo NoViolence
Laga soo bilaabo 2 OCTOBER 2019 TO MARCH 8 2020
MA U BAAHAN TAHAY IN LA QAADO?
Ka warbixi xaaladda khatarta ah ee adduunka iyadoo ay jiraan khilaafaadyo sii kordhaya, sii wad kor u qaadista wacyiga, sameyso ficillo muuqda oo la arki karo, cod siiso jiilal cusub oo raba inay rakibaan dhaqanka Rabshadda.
Iyadoo ay asal ahaan ka socdaan 1º World March 2009-2010, in maalmaha 93 ay ku safrayeen wadamada 97 iyo shan qaaradood. Tani 2ª World March ee loogu talagalay Nabadda iyo Dhibaatooyinka xilliyada 2019 iyo 2020 ayaa la soo jeediyey.
2ªMM waxay ka bilaabi doontaa Madrid 2 ee Oktoobar ee 2019, Maalinta Caalamiga ah ee Xad-gudubka. Waxay ka tegi doontaa jihada Africa, America, Oceania, Asia, waxay ku imaaneysaa Madrid xNUMX ee Maarso ee 8, Maalinta Haweenka Caalamiga ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee Maarso
2ª MM wuxuu ka bilaabay Madrid 2 2019 Oktoobar, Maalinta Caalamiga ah ee Xadgudubka, toban sano ka dib 1ª MM.
Ma rabtaa in aad nala shaqeysid?
Taageerida safarka bisha Maarso
Koorsada socodku waxay u baahan tahay kafaala-qaadayaal si ay u gaaraan dhagaystayaasha ugu badan iyo kaqeybgalka.
Isku xir xidhiidhyada bulshada
Waxay kicin doonaan ficilada iyo mashaariicda saldhigga bulshada.
Meelo ballaaran oo kala duwan oo kaqeybgal ah oo ka badan Kooxaha Hormarinta
Xiriirinta Caalamiga ah
Inay isku duweyaan waxqabadyada, jadwallada iyo jidadka
Macluumaadka qaar annaga nagu saabsan
Iyada oo ay tahay tii ka horaysay 1-dii Maarso 2009-2010, oo muddo 93 maalmood ah ku soo wareegtay 97 dal iyo shan qaaradood. Iyada oo khibrad urursan iyo tirinta tilmaamo ku filan oo leh xitaa ka qeybgal ballaaran, taageero iyo iskaashi ... Waxaa la qorsheynayaa in la fuliyo 2da Maarso ee Adduunka ee Nabadda iyo Xagjirnimada 2019-2020.
Ka warbixi xaaladda adduunka ee khatarta leh iyada oo la kordhinayo khilaafaadka
Sii wad in la abuuro wacyi-galin ah in ay tahay kaliya "nabad" iyo "rabshad"
Si loo arko tallaabooyinka kala duwan ee kala duwan ee dadka, ururrada iyo dadyawgu ay ku kobcayaan meelo badan oo ka mid ah jihada u adeegsiga xuquuqda aadanaha.
Si aad u sheegtid jiilasha cusub ee doonaya in ay qaataan oo ka tagaan calaamad